Liverpool oo guul rafaad ah ka gaartay kooxda Newcastle hogaanka lawareegtay ……. | Dunida Ciyaaraha
Liverpool oo guul rafaad ah ka gaartay kooxda Newcastle hogaanka lawareegtay …….
Published on May 4, 2019 by admin · No Comments
Naadiga kubadda cagta ee liverpool ayaa ciyaartay kulan adag kaasoo ahaa mid aad uxiiso badnaa waxaana ayla kulantay naadiga newcastle oo ku jirta waqti wacan.
Bilowgii hore ee ciyaarta naadiga kubadda cagta ee Newcastle ayaa ay isku dayday iney ka naxsato Reds balse waxaa ka horyimid weerarka duufaanta ah ee Liverpool , Sonamiga Reds ayaa goolkii ugu horeeyey keenay daqiiqadii 13aad isagoo u dhaliyey Virgil Van dijl kadib kubad koornaha ka timid.
Ciyaarta waxa ay aheyd mid aad uxiiso badneyd oo koox kasta abuureysay fursado aad u qaali ahaa oo goolal u dhigmayey , balse naadiga Newcastle United ayaa la timid goolkii bar baraha ahaa daqiiqadii 2aad Christian Atsu ayeyna ka heshay.
Wiilasha Klop ayaa si adag ku canaantay wiilashiisa waxaana uu ku amray iney keenay goolal kale balse daqiiqadii 28aad Maxamed Salaax ayaa daqiiqadii 28 aad gaaray shabaqa kooxda NewCastle sidaasna waxa uu uga dhigay 2-1 sidaasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Markii leysu soo laabtay qeybtii dambe ciyaarta mid aad uxiiso badneyd waxa ay soctaba naadiga Lverpool ayaa laga dhaliyey goolka 2aad oo ciyaart newcastle ayaa 2-2 ka dhigtay daqiiqadii 54aad waxaana u dhaliyey wiilasha St James Park Salomon Rondon oo u dhashay wadanka Vanezuela.
Intii ciyaarta ay socotay qeybtii dambe waxaa laga saaray xidiga weerarka Liverpool Maxamed Salaax kadib markii uu ku dhaawacmay kubad ayku kulmeen goolhayaha Newcastle United hadaba ciyaarta waxa ay socotay Liverpool ayaa waxa ay keentay goolkii ugu dambeeyey ee ciyaarta & kan guusha daqiiqadii 85 aad waxaana u dhaliyey Origi dheeman keydka sidaas ayeyna 90 kii daqiiqo ku soo idlaatay